Bịafra - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Bịafra bụla obodo ndï Ìgbo, nke pụtara ìhìe n'afọ 1967. Ndï bekee hapụrụ Naigeria na 1960, wéé nyehachi ndï ala Naigeria obodo ha. Ndï Ìgbo na ndï Hausa, bụ ndi n'achi Naigeria n'oge ahù luru ògù na 1967.
Biafra n'ime Afrịka
Ọkọlọtọ nke Biafra
1 Agha Biafra na Naigeria
1.1 Otu obidoro
2 Lee nke özö
3 Jikodo na aga n'ezi
Agha Biafra na NaigeriaMèzi
Íhe butere ọgụ ahu: Ufọdụ ndi ụmụ okọrọbia agha nke Naigeria (ọtụtụ n'ime ha bụ ndi Ìgbo) gbara mgba okpụrụ n'ebe isi ọchichi ndi isi ala anyi Naigeria nọ. Ha sitéré na mgba okpụrụ ahu wéré gbụo ụfọdụ ndi isi ala anyi (ụfọdụ n'ime ha bụ ndi Haụsa) nke ndi bekee nyefere ọchichi n'aka tụpụ ha hapụ obodo anyi. Ha wéé gbanwe ọchichi obodo anyi ma wéré onye isi agha ha méé ye onye isi ala Naigeria. Aha ya bụ Major Aguiyi Ironsi (Ìgbo).
Ọtụtụ ndi agha Naigeria bụ ndi Hausa, wéré iwe mmegwata ogbụo Major General Aguiyi Ironsi, ma wéré Gen.Yakubu Gowon (Hausa-Benue) dochie anya ya. N'iwe na ọnuma ha wéré gbuo ọtụtụ ndi Ìgbo bụ ndi isi agha nke Naigeria, ya na ndi Ìgbo aka ha di ọcha nọ n'ala ndi Hausa nke bụ isiala Naigeria. Lt Col. Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ onye na achi ndi ọwụwa anyawu Naigeria n'oge ahu, wéré juọ enyem-aka maka igbochi ogbugbu nke ndi Ígbo nọ na ala ndi Hausa, kama ndi n'achi ala anyi egeghi ya ntị. Íhe a méré ndï Igbo, ndi ikwere na ndï Ijaw jiri wéré kewapụ onwe ha na Naigeria. Ha wéré malite kpọwa onwe ha obodo "Bịafra". Ndi nachi ala Naigeria anabataghi ya. Ya mere n'afọ (otu pụkụ,narri ịtolụ,iri isii na asaa) ma ò bụ 1967 obodo Naigeria na ala Bịafra wéé malite ọgụ. Nke gbaruru afọ atọ, ma kwụsin'afọ 1970.
Jikodo na aga n'eziMèzi
Africa - Biafra
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Bịafra&oldid=63870
Last edited on 21 Ọnwaìsiì 2019, at 06:07
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 21 Ọnwaìsiì 2019, mgbe 06:07